Tag: ololeyaal faleebo | Martech Zone
Tag: ololeyaal faleebo
Axad, Abriil 3, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Qalabaynta suuqgeynta ayaa ah erey u eg oo u muuqda in lagu dabaqo wax walba maalmahan. Haddii barnaamijka softiweerku fariin ugu diro qofka qaata adoo adeegsanaya API-kooda, waxaa loo dallacsiinayaa inay tahay otomaatig suuq geyn. Fikradayda, tani waa uun daacad darro. In kasta oo tani ay noqon karto waxqabad otomaatig ah oo u dhigma istiraatiijiyaddooda suuq-geyn, haddana waa adag tahay xallinta otomatiga suuq-geynta. Xaqiiqdii, waxaan rumeysanahay in xalalka otomaatiga suuqgeynta badankood ee la heli karo - xitaa kuwa ugu waaweyn - ay leeyihiin
Suuq geynta Emailka otomaatiga ah iyo wax ku oolnimadiisa
Jimco, Nofeembar 13, 2015 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inaan hayno barnaamij faleebo ah oo ku saabsan suuq-geynta soo-dhoweynta oo aad iska qori karto bartayada (raadi is-dul-qaadka cagaaran ee foomka ah). Natiijooyinka ka soo baxay ololahaas suuqgeynta iimaylka otomaatigga ah waa wax la yaab leh - in ka badan 3,000 oo macmiil ayaa iska diiwaangeliyay aad iyo aad u yar oo ka mid ah macaamiisha. Weligeenna xitaa uma beddelin emayllada emayl qurux badan HTML wali (waxay ku qoran tahay liiska waxyaabaha la qabanayo). Email otomaatig ah ayaa hubaal ah
4 Cunsur oo lagu wado Jiilka Hogaaminta oo wata Aaladda Suuq geynta
Cilmi-baaris laga sameeyay daraasadda otomaatigga ee suuq-geynta shirkadda Venturebeat ayaa muujineysa in, marka laga reebo kala-soocidda astaamaha barnaamij kasta, caqabadda ugu weyn ee suuq-geynta suuq-geynta ganacsiga ay tahay fahamka sida ay ugu habboon tahay ururkooda. Waxaa laga yaabaa in taasi ay tahay… shirkadaha waxay isku dayayaan inay ku habboon yihiin otomaatiga suuq geynta halkii ay ka heli lahaayeen barxad horeyba ugu habboonayd hawlahooda gudaha, xoogooda iyo ilahahooda. Waan ka daalay sida ugu fiican ee liisaska otomaatiga suuq geynta ama xitaa habab laba jibbaaran. Markaan sameyno xulashada iibiyeyaasha
SumoMe: Lead Generation ee bartaada… oo leh Taageero Weyn
Sabti, Febraayo 21, 2015 Isniin, Janaayo 4, 2021 Sean Sullivan
Waxaan dhawaan aqrinayay bogga internetka ee 'Jeff Goins' waxaanan dareemay xoogaa is dhexgal ah oo aanan ku aqoonsanayn barta uu ku leeyahay WordPress. Waxaan isticmaalay WordPress Theme Search si aan baaritaan ugu sameeyo. Jeff wuxuu adeegsadaa qalab loo yaqaan 'SumoMe' oo ay sameysay AppSumo. Markii aan eegay dhammaan sifooyinka SumoMe, waan la dhacay. Waxaan qabay xoogaa su'aalo ah oo laxiriira waxyaabaha loo yaqaan 'plugins' iyo kooxda SumoMe ayaa ka jawaabey oo ka wada jawaabtey dhamaantood isla maalintaas. Way fiicantahay in la arko taas